मानव जीवन र योग -
भाद्र ११ गते २०७६
मानव जीवन र योग
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, पोखरा
योग सामान्य अर्थमा जोडफल हो, जस्तै ३+२=५ । तथापि यहाँ योगको वर्णन गर्दा महर्षि पतञ्जलीले योग दर्शन पुस्तकको समाधीपादमा लेख्नुभएको दोस्रो पुलोकमा प्रष्ट्याएको छ । ‘योगश्चित्तवृत्ति निरोध’ अर्थात योगको चित्रको वृत्ति अथवा मनको चञ्चलतालाई निरोध गर्छ ।
यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा त्यो अवस्था, जसमा मनको चञ्चलतालाई पूर्ण समाप्त गर्छ, त्यो नै योग हो । यसलाई अझै बुझ्नु पर्दा योगशास्त्र अनुसार योग शब्दको अर्थलाई ३ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
(१) ‘युजिर योग’ धातुबाट बनेको योग शब्द जसको अर्थ हुन्छ, समरुप परमात्माको साथ नित्य सम्बन्ध रहनु ।
(२) ‘युज समाधौ’ धातुबाट बनेको योग शब्द जसको अर्थ हुन्छ, चित्तको स्थिरता अर्थात समाधी स्थिति रहनु ।
(३) ‘युज संयमने’ धातुबाट बनेको योग शब्द जसको अर्थ हुन्छ, संयम, सामथ्र्य वा प्रभाबमा रहनु ।
यी ३ व्याख्याहरूमध्ये युजिर योगे धातुबाट बनेको योग शब्द नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको छ । जस अनुसार सदा आफलाई परमात्मासंगै पाउनु वा परमात्मा भित्र पाउनु भन्ने बुझिन्छ । जब परमात्ममा आफूलाई पाउँछौ, आफै परमात्माको स्वरुपमा रहन जान्छौं ।
यस अवस्थामा हामी अन्य विभिन्न विषयहरू अनावश्यक हुन जान्छ । जब परमात्माको अस्तित्वमा हामी आफ्नो हराउन पुग्छौं, हामी भित्र पारमात्मिक शक्ति संयम्, सामर्थ्य एवं प्रभाव प्राप्त गर्छौं ।
यस्तै गीतामा भगवान श्रीकृष्णले योगलाई भक्ति, ज्ञान एवं कर्म योगमा बाँडेर व्याख्या गर्नु भएको छ । योगराज उपनिषदमा योगलाई मन्त्र, लय, हढ एवं राजयोग गरी ४ विधामा वर्णन गरिएको छ ।
माता पार्वतीले आफ्नो अस्तित्व बिर्सदा स्वयं भगवान शिवले योग साधना गराई चेतना जागृत गराएर आफ्नो शक्ति एवं अस्तित्वको बोध गराउनु भएको शास्त्रमा उल्लेख छ । यसरी भगवानको पालादेखि चलिआएको योग साधना समयको रफ्तार संगै हराउन पुग्यो ।
यस्तै समयमा विश्वमै योग जागरण ल्याउने हेतुपूर्वक योग गुरु स्वामी रामदेवको उदय हुन आयो । सूर्य झै तेज आभा बोकेका प्रतापी गुरुबाट आज सारा विश्व ब्रहमाण्ड योगमय बन्दै नित्य साधनाको रुपमा आत्मसात गर्न उत्साहित भइरहेको छ ।
बन्द कोठा भित्र महंगो रकम तिरेर वा जंगलमा एकान्त बसेर गरिने योग अभ्यास आज आएर मन्दिर सार्वजनिक हल वा खुला चौरमा ठूलो समूहमा बाँधिएर गर्न थालेको छ । त्यसैले स्वामी रामदेवज्यूमा यो पंक्तिकारको सदा नमन रहने छ ।
पोखरामा योगको पदार्पणको कुरा गर्दा वि.सं. २०६४ सालतिर तत्कालिन पतञ्जली नेपालका राष्ट्रिय प्रभारी डा. चन्द्रमणि खनालले शुरुवात गर्नुभएको हो ।
योगमा म स्वयं
वि.सं. २०६५ सालमा सह–प्रशिक्षकको तालिम लिएर म आफू पनि श्रीकृष्ण योग केन्द्र दरबारथोक न्यूरोडमा योग प्रशिक्षणमा संलग्न हुँदै आएको छु । यसै केन्द्रका साधकहरूले सह-शिक्षकको तालिम लिएर ५ वटा नयाँ योग केन्द्र स्थापना गरी दैनिक थुप्रै समाजका व्याक्तिहरूलाई योग प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
समयको अन्तरालमा स्वामी रामदेव गुरुज्यूको मुखारविन्दुबाट निस्कने हरेक लवजहरूले मेरो चित्तलाई भिजाउने गर्यो । अनगिन्ती उहाँका प्रेरणादायी शिक्षाहरूमध्ये २ वटा वाणीहरूले विशेष गरी मेरो हृदय छुन गयो । जुन यस्ता छन्,
१) विश्वका हरेक नागरिकले योग अभ्यास नित्य गर्नुपर्छ ।
२) भारतमा भारतीय स्वाभिमान खोलेर राष्ट्र निर्माणका लागि धेरै कर्महरू गर्न गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा नेपाल स्वाभिमान संस्था खोल्न नसकिने ।
पहिलो बुँदासंग म आत्मसाथ हुन चाहन्छु । योग साधनालाई परिवार, समाज, गाउँ, शहर हुँदै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै मानवहरूले गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । जसले गर्दा संसारका सम्पूर्ण मानिस आफूभित्र रहेको अद्विधालाई पखालेर भातृत्व भावनामा मिलेर बस्न सक्छ ।
दोस्रो बुदाँसंग म नजिक हुन सकिन । नेपालमा जन्मिए पढे बढे यहाँको हावापानी र माटोसित खेल्दै अघि बढे । त्यसैले विदेशी आवरणमा योग साधक बन्न सकिन्न । शिक्षा ग्रहण गर्न त जहाँबाट पनि हुन्छ, जोसंग पनि हुन्छ । तर मातृभूमिको ऋण तिर्न नेपाली आवरण भित्र बसेर कर्म गर्नैपर्छ ।
यसै कारणले नेपाल स्वाभिमानको टिका लगाएर राष्ट्रिय भावनाले योगमा सलन हुन पुग्दा सम्भवत देशको उन्नतिको बारे चिन्तन, मनन हुने रहेछ । नेपाल आमाको सन्तानको रुपमा धेरै केही गर्न नसके पनि योग विधामा पातञ्जल योग समिति नेपाललाई हृदयमा अंगाल्न पुगे । यसै विचारमार्फत समस्त विश्व आत्माहरूलाई योग नित्य गर्न यस संस्थामा आबद्ध हुन बिनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सम्भवत् ६०/७० साल अघिदेखि हामीमा आत्म विश्वास घट्दै आएको छ । कुनै पनि काम हाम्रा निम्ती अरुले ठिक्क बनाउनु पर्छ वा गरिदिनु पर्छ । अरुमा निर्भर रहने हाम्रो रगतमै बसेको बानी बनेको छ कुनै पनि काम हामी आफै अघि बढेर गर्न सक्दैनौं भन्ने भ्रमले मन–मस्तिष्कमा ढाकेर बसेको छ ।
त्यसैले अनगिन्ती संख्यामा विदेशीहरू आएर नेपालको सरकारी वा गैरसरकारी कामहरू गर्ने गर्छन् । विदेशीप्रतिको विश्वास र सद्भाव अनि हामी भित्रको दास मनोवृत्तिले गर्दा यो सुन्दर देश नित्य ओरालो लागेको छ ।
यो देशमा भगवान गौतम बुद्ध, माता सीता, कश्यप ऋषि, कपिलमुनी ऋषि, विदेह राजा जनक, बेद प्रवद्र्धक व्यास ऋषि आदि महामानवहरू जन्मिसकेका छन् । जसले सारा विश्वलाई मार्ग दर्शन गरीसकेका छन् । तर हामी ती इतिहास मेटाउँदै छौं । हामी आफै पनि विभिन्न विधामा जस्तै योगमा पनि परिश्रमी हुन गयौं ।
योगको शुरुवात हिमालयमा भएको भन्ने किंवदन्तिमा उल्लेख छ । योगको उद्गम स्थल आज आएर रित्तिएको अवस्थामा रुपान्तरण हुँदैछ । त्यसैले अब हामी जागरुक भएर निद्राबाट व्युँझिएर होसपूर्वक उठ्न जरुरी छ ।
शिक्षा र दीक्षा जहाँ जुन देशबाट लिए पनि अब यसको विस्तार आफ्नै माटो, हावा, पानी सुहाउँदो गरी स्वदेशकै नीति नियम भित्र बाँधिएर राष्ट्रव्यापी बनाउनु आवश्यक छ । आउनुस् ‘पातञ्जल योग समिति नेपाल’ लाई सबैको मिहिनतले राष्ट्रिय संस्था बनाऔं र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्वमा चिनाउन प्रयत्न गरौं ।
सर्ब प्रथम त ‘पातजञ्ल योग समिति नेपाल’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता भएको औपचारिक संस्था हो । यसको दर्ता नं. १७१/०७५/७६ हो । यो संस्थाको माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू सबै नेपालमै जन्मिएका र मन र मुटु सबै नेपाली नै भएकाहरू छन् ।
यसले हामी सबैका लागि यो संस्था गौरब एवं सौभाग्यको कुरा हुनुपर्छ यसको बीउमा यहीको माटो, हावा, पानी छ । अब सबै मिली गोडमेल र मलजल गरी ठूलो वृक्ष बनाउनु पर्छ ।
यसबाट निस्किएको बेर्नालाई सर्वप्रथम ७ वटा प्रदेशमा लगाउनुपर्छ । विस्तारै अघि बढ्दै ७७ जिल्लामा पुर्याउनु आवश्यक छ । अनि हामी सबै जागेर गाउँ हुँदै समाजको तप्का सम्म लैजान प्रयत्नशील हुनुपर्छ ।
योजना विश्लेषण र निर्णयद्धारा सैदान्तिक विषयलाई कडा मिहिनत र विद्वताले व्यावहारीक रुपमा लैजान सक्यौं भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं । यसको निम्ती लघु एंव दीर्घ योजना बनाई दक्ष व्यक्तिहरूको काँधमा जिम्मेवारी दिई अघि बढ्न सके र सरकारको पनी सकारात्मक दृष्टिकोण रहे यो साझा लक्ष असम्भव छैन ।
योगसंग जोडिएको अज्य विषयहरू प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक उपचार विधि एवं आयुर्वेद औषधिहरूको बारेमा ज्ञान गराउन सके नेपाल विश्वको सुन्दर एंव रमणीय देश मात्र नभई योगमा पनि विश्वको अग्रस्थानमा अवश्य हुने थियो ।
स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयसम्मको पढाई औपचारिक रुपमा गर्न सके पातजञ्लको औचित्य सार्थक हुनेछ । नेपाल भौगोलिक विविधता भएको देश हो । यहाँ संसारमा पाईने र नपाईने हरेक खालको वनस्पति, जडिबुटी र हावापानी पाइन्छ । यसको सही सदुपयोग गर्न सकेमा पनि यो देशमा गरिबी हटेर जानेछ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा यसले बलियो टेवा दिएर अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव पार्नेमा दुई मत छैन । राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा एउटा तप्काका नागरिक मात्र नभई देशको समग्र जनताले साझा उद्देश्य बनाई प्रयत्नरत भएमा पातजञ्लको औचित्य प्रमाणित हुन जानेछ ।
सबैमा मेरो ॐ को नमन् । जय देश ! जय राष्ट्रवाद !
(लेखक श्रेष्ठ पातञ्जल योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं योग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ ।)